Igwe ahia: Mee ka nnwale ọnwụnwa SaaS na nnabata ndị ahịa | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị na-ere a Software dị ka a Service (SaaS) ngwaahịa, ego ị na-enweta na-adabere na itinye data ndị ahịa na ojiji nke ngwaahịa na kọntaktị na ọkwa akaụntụ. Ngwa ahịa na-enye ndị ahịa na ndị otu ihe ịga nke ọma ikike ịghọta ihe na akpaaka ka iwelie ntụgharị Ọnwụnwa na Adoption Ndị Ahịa.
Igwe Azụmaahịa Nwere Abamuru Abụọ
Nkwalite Ọnwụnwa Nkwalite - Akara ruru eru na-eduga dabere na ndị ahịa dabara na nnabata ngwaahịa. Izu ahia nke ihe eji ere ahia na-enye ndi otu ahia gi aka ilekwasị anya na ndu ndi ruru oke na imechi uzo di nma na obere mgbalị.
Mee ka nnabata ndi nnabata na njigide - Nchịkọta proactive napụta iji nyefee ihe ịga nke ọma na njem ndị ahịa niile. Igwe na-enyere gị aka ịme ihe ịga nke ọma na ọkwa ọ bụla nke njem ndị ahịa ma soro onye ahịa ahụ mee ihe mgbe achọpụtara ihe egwu.
Etu esi ere ahia na-eme ka ntụgharị ọnwụnwa bawanye
Ahịa Fit Akara - Maka ntinye aka ọhụrụ ọ bụla Salesmachine na-agbakọ akara ahịa ndị ahịa dabara na omume igwe mmadụ ya, yana ozi ụlọ ọrụ.
Product nkuchi Akara - Ntughari ngwa ahia dabere na akaụntụ na omume onye ọrụ, oge ojiji, mmeghari ihe, NPS na akara ndị ọzọ.
Iru eru nke nnwale - Ikpokọta Ahịa dabara akara na Product doro doo iji chọpụta Product Ruru Edu na-eduga (PQL).
Amụma Ọrụ - Gwa ndi ahia gi na CRM, Email ma obu Slack mgbe achoputara nnwale ohuru ohuru.
Arụ ọrụ akpaghị aka - Nkwalite ntinye aka maka ndị ahịa dị ala, yana usoro ịbata na ozi ịntanetị.
Nkwupụta Nkuchi Ikpe - Sochie, tụọ, nyochaa ọtụtụ na ntụgharị iji melite izi ezi na arụmọrụ.
Etu esi ere ahia na-abawanye nnabata ndị ahịa
Nlekọta Ahụike - Ngwa igwe na-agbakọ ahụike nke ndị ahịa gị na-akpaghị aka dabere na omume ha. Nwere ike iji aka gị tinye ha n'ọrụ mgbe achọpụtara ihe egwu ma ọ bụ ohere gafee njem ndị ahịa niile.
Mata ihe egwu - A na-ejikọta Salesmachine na Slack, Email, na ngwaọrụ ndị ọzọ iji gwa ndị ọrụ mgbe ịda mbà na ahụike ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla.
Ahịa Ndụ Ndị Ahịa - Ekwesighi ịgwọ otu onye ahịa n'ọgbọ ndụ ndụ Onboarding otu aka karịa onye ahịa ka usoro ndụ ọhụụ ọhụrụ. Igwe na-enye gị ohere ịmekọrịta ndị ahịa n'ofe ọkwa dị iche iche nke njem ndị ahịa.
Akwụkwọ ọgụgụ - Mgbe achọpụtara ụzọ ọhụụ ruru eru, Ahịa aka nwere ike izipu ozi ịntanetị na-akpaghị aka, mepụta ọrụ na CRM gị, zitere gị ọkwa. Ọ bụ gị onwe gị nnyemaaka ndochi gị kalenda na igbe na ruru eru na-eduga na-emechi.
Akpaaka Workflows - Ahịa bụ ikpo okwu mepere emepe, mepụta omume na ọrụ ndị ọzọ nke 3 dị ka Salesforce, Hubspot, Pipedrive, Intercom iji hazie omume n'etiti otu dị iche iche na-emekọrịta ahịa gị.
Ngosipụta ogo 360 nke ndị ahịa - Nwee echiche zuru oke banyere ndị ahịa gị. Nchịkọta n'otu ebe niile Intercom, mkparịta ụka email, Nkwado nkwado, akara NPS.
Nkwado Nkwado Ndị Ahịa - Gosipụta uru omume gị bara. Tụọ mmetụta nke usoro azụmaahịa gị na uru gị, ahụike ndị ahịa, churn, na ndị ọzọ.
Rịọ ahịa igwe
Tags: ikuchi ndị ahịanjigide ndị ahịaObi ỤtọGmailájáakụrụngwa ahịaOlarkmmeghari ohurusaasndị ahịaigwe ahiankeStatisMitawararaikpe nkuchiikeOnyebuchi
Nkọwa Ọhụụ Ọhụrụ (Regex) Redirects Na WordPress
Iwu ahia ohuru: Ego, ma obu ozo